ILogitech ikwajonga nakwii-consoles, ithenga i-Astro Gaming | Iindaba zeGajethi
ILogitech ikwajonga nakwiikhonsoli, uthenga iMidlalo yeMidlalo yeAstro
Isiginitsha yeLogitech ngokungathandabuzekiyo iphezulu kwaye iphezulu, ngokungathi ayonelanga Ukunyamezela ngexabiso elibalulekileyo lophawu iminyaka emininzi kwintengiso eguqukayo, indlela abathi bahlule ngayo iiasethi zabo zibabeka njengophawu olukwaziyo ukusithengisa ngazo zonke iintlobo zeemveliso zetekhnoloji, nokuba leliphi iqonga esilisebenzisayo.
Ukuba ngeJaybird kunye neeNdlebe eziPhezulu ifemu ibibonisile ukuba inokwenza iimveliso ezimnandi zomsindo, ngoku ingena ngokupheleleyo kwimakethi yemidlalo yokudlala ngokuthenga i-Astro, enye yezona zinto zintle ezithandwayo zemidlalo yentloko. Makhe sibone ukuba uLogitech uyakwazi njani ukuqhubeka nokuwina intliziyo yentengiso ekhula ngokunyuka, engazange idlale kangako, kwaye ikumgangatho onjalo.
Ngale ndlela I-Astro Gaming iba yinxalenye yeLogitech G Series, Uluhlu lweemveliso ezinikezelwe kubasebenzisi abonelisayo abaneemfuno ezithile ezinxulumene nemidlalo yevidiyo, kwaye ngayiphi indlela. Kubaluleke kakhulu kwimarike yentloko yokudlala yeekhonsoli, kuba i-Astro ine-niche ebalulekileyo yentengiso ngaphakathi kwabasebenzisi be-PlayStation 4 kunye ne-Xbox One, enyanisweni kulula kakhulu ukubona abadlali bezemidlalo abanee-headphones abazibonelelayo. kwitumente epheleleyo.
Umsebenzi uqikelelwa ngeenxa zonke 85 iidola ezigidi, Akukubi konke konke ukuba sithathela ingqalelo ulutsha lwenkampani yeMidlalo ye-Astro. Kucacile ukuba ngokufunyanwa kweJaybird, iiNdlebe eziGqithileyo kunye neMidlalo ye-Astro (ngokuqinisekileyo siza kushiya enye imibhobho) ILogitech ifuna ukujongana nazo zonke iintlobo zentengiso ngokubhekisele kwizixhobo zetekhnoloji, kwaye okwangoku qhubeka nokuziphatha njengenye yeempawu ezaziwayo phakathi kwabasebenzisi kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » ILogitech ikwajonga nakwiikhonsoli, uthenga iMidlalo yeMidlalo yeAstro
I-PayPal idityaniswa neTunes kunye neVenkile yeApple phantse kwiminyaka elishumi elinesithathu kamva
UDell wazisa ilaptop yokuqala ngokutshaja ngaphandle kwamacingo